Zim to establish first leather design studio – NewsPages.co.za
Home/World/Zimbabwe News/Zim to establish first leather design studio
Zim to establish first leather design studio
Prosper Ndlovu-Bulawayo Bureau
“The purpose of the studio is to facilitate state of the art design and product development, pattern engineering and prototyping of common products such as school shoes, boots for the police, army and security firms, among others.”
“The regional design studio project aims to boost design originality and branding through inculcating design thinking, product development, quality assurance and entrepreneurship, which will contribute to strengthening the Zimbabwe leather clusters’ capacity to participate in national, regional and global export markets,” said ALLPI. Industry and Commerce Minister, Dr Sekai Nzenza, has said that Bulawayo, as the country’s manufacturing hub, would play a leading role in implementation of leather transformation projects.
“I am very pleased to let you know that through our engagements with Comesa, we have received US$15 million to capacitate the leather industry and the leather value chain and this will be implemented through close collaboration with the Bulawayo Leather Institute,” said Dr Nzenza in a recent update in Parliament.
This has seen key industry players agreeing to synergise under the “Zimbabwe Leather Collective”, a strategic approach to scaling up capacity and increase supply for domestic and international markets.
The sector is seen as a low-hanging fruit for Zimbabwe given the country’s competitive advantage in livestock and crop production, which are key sources of raw materials. Cabinet approved the new Zimbabwe Leather Sector Strategy last November as part of measures to position the sector for increased domestic value addition and beneficiation towards export-led industrialisation.
design establish Leather Studio Zim
Zimbabwean players abroad impress on fruitful weekend